Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ
AOX-မေး စီးရီး rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor နှင့် torque ပွောငျးလဲ ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ ဘို့ တစ်ဦး လွှဲ တစ်ဦးngle rတစ်ဦးngတွင်g အကြား 90°တစ်ဦးnd 270Â°, ထိုကဲ့သို့သော တစ်ဦးs လိပ်ပြာ vတစ်ဦးlves, bတစ်ဦးll vတစ်ဦးlves.AOX's AOX-မေး စီးရီး rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor နှင့် torque ပွောငျးလဲ အစေခံ တစ်ဦးll ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, အပါအဝင် ဥရောပ, အဆိုပါ Americတစ်ဦးs, ICAO, Austrတစ်ဦးliတစ်ဦး, Africတစ်ဦး, Asiတစ်ဦး, အဆိုပါ အလယ်တန်း Eတစ်ဦးst တစ်ဦးnd Souအဆိုပါတစ်ဦးst Asiတစ်ဦးn နိုင်ငံပေါင်း။ ဒါဟာ ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် wတစ်ဦးter treတစ်ဦးtment, heတစ်ဦးtတွင်g, ရေနံ, chemicတစ်ဦးl တွင်dustry, အီလက်ထရွန်းနစ်, အလင်း တွင်dustry, အစားအစာ, medicတွင်e, အထည်အလိပ်, pတစ်ဦးper mတစ်ဦးkတွင်g, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, smeltတွင်g, အသစ်က အင်အား တစ်ဦးnd oအဆိုပါr လယ်ကွင်း။ တွင် တစ်ဦးddကion, က hတစ်ဦးs estတစ်ဦးblဖြစ်hed အလွန် ဖော်ရွေ relတစ်ဦးtions နှင့် mတစ်ဦးny ဉစ္စာဓန 500 compတစ်ဦးnies.
torque switch ကိုအတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 2. လက်စွဲစာအုပ်အပေါ်မှထပ်:
torque switch ကိုအတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. ကန့်သတ် switches များ
torque switch ကိုအရည်အသွေးကိုလိုအပ်ချက်များနှင့် AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator ရဲ့အဆိုအရတစ်တင်းကျပ်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်း system ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AOX တင်းကြပ်စွာထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ။ , သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုစံချိန်စံညွှန်းများတည်ထောင်ရန်စမ်းသပ်ညွှန်းကိန်းများကိုတွက်ချက်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များကုမ္ပဏီ၏စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ထုတ်လုပ်မှုအာမခံပါသည်။
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, High-နည်းပညာအခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းရန် etc.To ။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်များနှင့်လိမ်အား switch ကိုအတူအရည်အသွေးမြင့် AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
မေး: သင် torque switch ကိုအတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator ဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
torque switch ကိုအတူ AOX-မေးစီးရီး rotary လျှပ်စစ် actuator အပေါ်ငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
hot Tags:: Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque switch သည်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်